US, UK, France iyo Germany ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay inay ka baxaan Itoobiya hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Itoobiya » US, UK, France iyo Germany ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay inay ka baxaan Itoobiya hadda
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Itoobiya • Wararka Faransiiska • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Colaadda hadda jirta waxay ka qaraxday Waqooyiga Itoobiya sannad ka hor, markii dawladda federaalku ay billowday hawlgal milateri oo ka dhan ah jabhadda gooni u goosadka, Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF).
Iyadoo laga cabsi qabo in jabhaddu ay ku soo wajahan tahay caasimadda Itoobiya. Addis Ababa, dhowr dawladood oo reer galbeed ah ayaa muwaadiniintooda ugu baaqaya inay sida ugu dhakhsaha badan uga baxaan Itoobiya.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka iyo safaaradda Faransiiska ee Addis Ababa ayaa maanta soo saaray bayaanno kala duwan, waxayna kula taliyeen cid kasta oo u dhalatay dalkeeda inay isaga baxaan si aan dib-u-dhac lahayn. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa dhawaan soo saaray talooyin la mid ah muwaadiniintooda.
The Qaramada Midoobay (UN) Waxa kale oo ay xaqiijisay in ay ka shaqaynayso in ay si ku meel gaadh ah u rarto xubnaha qoyska ee shaqaalaheeda caalamiga ah ee Itoobiya sababo la xidhiidha xaaladda ammaan ee dhulka oo sii xumaanaysa.
Horaantii bishan, 22 ka mid ah shaqaalaha Itoobiya ayaa xabsiga loo taxaabay oo ay xireen ciidamada dowladda markii ay howlgallada ka sameeyeen gudaha dalka Addis Ababa Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in lagu beegsanayo qowmiyadda Tigrayga. Qaar ayaa markii dambe la sii daayay.
Kooxdan oo sanado badan soo maamulaysay dalka ka hor intii aan xukunka laga tuurin sanadkii 2018-kii ayaa bilihii lasoo dhaafay u suurtagashay in ay dib ula wareegaan inta badan gobolka Tigray oo ay ku jirto caasimaddiisa Mekele. Talaadadii, TPLF waxay sheegtay inay la wareegtay gacan ku haynta Shewa Robit ayna u sii socoto Addis Ababa, qiyaastii 220 km (136 mayl) u jirta.